Teregiramu inovandudzwa uye nhau hadziregi kusvika | IPhone nhau
Teregiramu inovandudzwa uye nhau hadziregi kusvika
Instant messaging applicationZvinosuruvarisa, iwo ndiwo epicenter yemazuva edu nhasi ne smart mobile telephony, zvirinani izvo zvevazhinji vashandisi. Kwete kare kare kuti BlackBerry Pin kana WhatsApp vakatonga vari vega nekubatana, asi kusvika kweTeregiramu neFacebook Messenger kwagadzira makwikwi anonakidza atisingakwanise kugara kure nawo.
Teregiramu inoenderera ichienderera uye ichiita basa rekuvandudza, mune ino yazvino yekuvandudza ivo vakavandudza maitiro echisimba ekuchengetedza zvinyorwa, uye tinogona kuona kana vashandisi vari online. Hunhu uhwu hausi kutungamira muTeregiramu, sezvazvakaitika nevamwe vazhinji vakateedzerwa nemakwikwi, asi ivo vanogamuchirwa.
Iyo inotevera AirPods inozochinja zvakanyanya mukati kupfuura kunze
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana tikaita swipe refu kubva kurudyi kuenda kuruboshwe tinokwanisa kunyatso chengeta chat pasina kuita mamwe mabhatani, kunyangwe pachezvangu ndingadai ndakasarudza kuti chiito ichi chakabvisa chat. Isu zvakare tine yakavandudzwa chengetedzo yekuvhara skrini dhizaini uye kwete zvishoma, iyo "online" bheji., iyo ichatizivisa kubva kuchat skrini pamusoro pekuti mushandisi watinoda kutaura naye kwekanguva akabatana panguva iyoyo, kana kwete. Kune rimwe divi, runyorwa rwezvakachengetedzwa chats zvinogona kutodarika zana.
Nekiyi nyowani yekukiya tinokwanisa kushandisa kodhi ine manhamba matanhatu (Kune husimbe zvakadii) kuvharira kupinda kweTeregiramu, uye pakupedzisira, isu tinokwanisa kubvisa matikiti achangobva kushandiswa pamadiro. Teregiramu inoenderera mberi nekusimudzira kwayo, kunyange hazvo hondo yekurwisa WhatsApp yatove kupfuura yakarasika, chokwadi ndechekuti ine mushandisi wakasimba. Isu tinotora mukana uno kukuyeuchidza kuti isu tine rinobatana boka uko iwe kwaunogona kubvunza vedu vapepeti mibvunzo yako yese uye kutaura nezve Apple nyika mune zvese (link).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu inovandudzwa uye nhau hadziregi kusvika
Anoshanda Apple-1 inotengesa madhora mazana matanhatu ezviuru pamusika
Apple ingadai yakatengesa 4.5 miriyoni iPhones XR muUnited States